Fandrobana tsy tanteraka :: Maty voatifitra ilay tovolahy saika nangalatra kisoa • AoRaha
Fandrobana tsy tanteraka Maty voatifitra ilay tovolahy saika nangalatra kisoa
Namoy ny ainy voatifitra ny iray tamin’ny lehilahy telo nikasa nangalatra kisoa tao amina toeram-piompiana iray, tany Andraikavo Itaosy, tamin’ny alin’ny zoma hifoha sabotsy lasa teo. Tovolahy, roapolo taona, ity lavon’ny bala ity. « Efa fantatra ny mombamomba an’ireo namany roa lahy”, hoy ny zandary. Miomana hiroso amin’ny fisamborana iretsy farany.
Nitsambikina teo amin’ny tamboho ny lehilahy telo nikasa hangalatra tao amin’io toerana malalaka fiompiana kisoa io.
Henon’ny tompon-trano ny fidiran’izy ireo. Nantsoina an-telefaonina avy hatrany ny zandary. Nivoaka ihany koa ny olona tao an-trano nanakana sy nanohitra an’ireo mpanafika teo am-piandrasana ny mpitandro filaminana. Ny andiana zandary nanao fisafoana teny amin’ny manodidina no tonga haingana teny an-toerana. Tovolahy iray nitsitra teo an-tokontany no novantanin’izy ireo. Voalaza fa maty voatifitry ny tompon-trano io tovolahy io. Tafaporitsaka ny namany roa. Tsy nisy ny entana na ny kisoa voaroba.
Poa-basy indray mandeha no re teny an-toerana, tamin’io sasak’alina nisehoan’ny fanafihana io. Nivoaka nifampanontany ny zava-misy ny mpiara-monina. Teo no ho eo ihany dia fantatra ny endrik’ity namoy ny ainy voatifitra.
«Mipetraka eo an-tanàna ihany izy telo lahy nanafika. Tsy lavitra ny toerana lasibatra ny tranon’ilay voatifitra. Fantatra fa mpamerin-keloka sy efa nisazy indroa tany am-ponja io tovolahy io», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny zandary eny Itaosy.
Kolikoly avo lenta :: Nogadraina ny vehivavy iray vadina minisitra teo aloha